Sheekh Shariif “30 sano kadib waxaa dalka lagu celinayaa nidaamka kalitalis ah” – Somali Top News
Dowladda Federaalka oo ka Jawaabtay shidaal baarista uu sheegay Erdogan
Wasiirka Boostada oo ka hadlay xarun laga burburiyay shirkadda Hormuud
Gudoon cusub oo loo doortay Guddiga doorashooyinka Madaxweynaha Galmudug
FESOJ Concludes 2 Day Training for Women Journalists in Kismayo to Promote Young Women’s Voices in Media
Sheekh Shariif “30 sano kadib waxaa dalka lagu celinayaa nidaamka kalitalis ah”
October 11, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dowladii KMG aheyd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in xilligaan xaaalada dalka ay qabaan walaac farabadan,sidaas daraadeedna caleema saar kaliya aysan u tegin Magaalada kismaayo.
Waxaa uu sheegay inay yeelanayaan wadatashiyo kala duwan,kadib walwal badan ay ka qabaan sida ay wax u socdaan,hayeeshee ay hadda ku baraarugeen,isla markaana aysan aqbaleyn in sharciga laga tago.
“Runtii aniga waxaa leygu tirinayay dadka aad dowladda ugu dhow oo dadka dhaha hala daayo,maantana xaalada waad la socotiin,30 sano kadib naloo celiyo nidaam kali talis ah oo aan ogoleyn sharci iyo soomaalinimo,balse waxaa Alle mahadiis ah in aan ku wada baraarug sanahay u wada joogno taladeeda wada leenahay waana jecel nahay dowladnimada ayuu yiri”Sheekh Shariif.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku wada joogaan sharci iyo dastuur ayna wanagsan tahay in lagu wada dhaqmo,isla markaana aysan dooneyn in dowladnimada ay u dunto in sharciga lagu dhaqmi waayo.
Ugu dambeyn Arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday Sheekh Shariif,waxaana uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo aysan xilka ku heysan laakin ay doonayaan inay dhacdo doorasho xur iyo xalaal ah o aysan noqon mid dad gar ah ay sameystaan.
Hadalkan ayaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa uu sheegay xilli uu tegay Magaalada Kismaayo halkaas oo la filayo inay ka dhacdo xaflada Caleema saarka Madaxweynaha Jubbaland.
← Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka dowladda Kenya u jooga dalkeena
Farmaajo “ Cabeey Axmad wuu u qalmaa inuu ku guuleysti biladda Nobel Peace Prize” →
Dib u dhac kale oo ku yimid shirka dib u heshiisiinta Galmudug
August 17, 2019 Somali Top News 0
Dowladda Federalka oo wax kabadal ku sameysay dib u dhiska Galmudug
December 2, 2019 Somali Top News 0
Maxaa kajira in cudurka Kansarka daawo loo helay?